Diin Waa Lagu Fashilmay Wadaadna Shaki Weyn Baa Galay! | KEYDMEDIA ONLINE
Diin Waa Lagu Fashilmay Wadaadna Shaki Weyn Baa Galay!
Rashiid Warsame - Kacdoonkii Diinta ee lagu Qaraabanaayey waa lagu fashilmay, wadaadna shaki weyn baa galay. - Dhibaatada Soomaaliyeed wey daba dheeraatay. Waxaad mooddaa in aan hawsheedba lagu jirin in dalkaasi nabadoobo si ay ummaddu u hesho Nolol iyo Hurumar.
Daahida xalka kuwii shalay dalka dembiyada ka galay waxay ka dhigteen in ay sidaa ku tirtirmeen dembiyadii ay galeen taarikhduna ay illowday jariimooyinkii dhacay. Taasi waxay keentay in Haraadigii Siyaad Barre iyo Qabqablayaashii Dagaalku hammiyaan xukun ku soo noqosho riyo ah.
Waxaa taa ka daran kuwa xukun ku sheeg haysta oo meesha isa siiyay oo aan dooneyn inay ummadda ka horwareegaan in qori loo qaato mooyee iyo kuwa iyaguna qoray iyo magac diimeed wax ku doonaya si waalli ah.
Dalkaa waa loo tashaday, in wax u hagaaganna in badan oo shisheeye iyo soomaaliba leh oo aan doonayn baa jira. Bal eeg manta Keenya iyo Etiyoobiya baa iska soo gelaya iyagoo marmarsiiyo ka dhiganaya Shabaab baan la dirireynaa. Shabaab waa u dhammaatay ee halkey joogaan oo ay kala dirirayaan?
Shabaab in ay baabaa'een cidina manta kama qarsoona, laakin runtii waa marmarsiiyo lagu meelmarsanayo qorshayaal hore u degsanaa oo ah in Soomaaliya la qabsado waxa ay wadaan Keenya iyo Etiyoobiya.
C/waali Gaas, Shariif Lamood iyo Shariif Sakiin waa ka raalli in magaca Soomaaliya laga tirtiro khariidada jooqaraafiga adduunka wax yar oo manaafacad ah oo loo tuurtuuro iyo xukun ku sheeg aan sal lahayn dartiis.
Kuwaas waxaa la mid ah kuwa Baarlamaanka ku jira oo sankooda meel ka fog aan wax ka arkin iyo kuwa kale oo ah kuwii shalay (waagii Siyaad Barre) wax qasayay sida Cabdirisaaq Juurile.
Aqoonyahanka dibadjoogga ah ee Soomaaliyeed raalli kama aha in Etiyoobiya iyo Keenya iska soo galaan dalka Soomaaliya waxayna ku baaqayaan in la abuuro xoogag wax iska caabbin oo ka fiyoow qabiilka iyo diinta oo fashilka manta taagan sababay.
Waa in lala diriraa xogagga Keenyaanka. Waa in laga hortagaa af iyo addinba xogagga Etiyobiyaanka ah. Sidoo kale waa in tillabo cad laga qaadaa kuwa u adeegaya xoogaggaas shisheeye sida Juuriile iyo kuwa la midka ah.
Ummadyahay illooba kala qaybsanaanta idiin dhextaal. Diin waa lagu fashilmay oo kuma dagaalgeli kartaan. Waddaniyad iyo dadnimo ayaa loo baahan yahay.
Shabaab xoogaaga ka haray waxaan ugu baaqayaa inay ummadda Soomaaliyeed cafis weydiistaan sida ay ugu dhiirradeen shacabka magaalada Jowhar inay ka raalli geliyaan khaladaadkii ay u geysteen.
Waa inay calankooda madow beddelaan oo calanka Soomaaliyeed ee xiddigta cad ee shangeesoodka ah dhexda kaga taal qaataan. Waa inay halganka wax iska caabbinta cadawga dalka ku soo duulay safka dambe ka soo galaan.
Tasriix caynkaa ah ayaa laga sugayaa sida ugu dhaqsaha badan, haddii kale waa laga soconayaa oo hawlaha waa la sii wadayaa la'aantood iyaga umbaana ummadda ka haraya waqtigii ay ku habboonaatana waa lala xisaabtamayaa.